कृषि विकास कार्यालय कालिकोटलाई डिपीआरबारे मन्त्रालयको पत्र, के भएको हो तत्काल जानकारी दिन निर्देशन – Enayanepal.com
कृषि विकास कार्यालय कालिकोटलाई डिपीआरबारे मन्त्रालयको पत्र, के भएको हो तत्काल जानकारी दिन निर्देशन
२०७७, २३ असार मंगलवार मा प्रकाशित
कालिकोट जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नं. दुइमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगत कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सञ्जेलवाडा, बाँजथला कुइँकेलवाडा नामक कृषी सडक निर्माण गर्न भन्दै दश लाख रुपैंया विनियोजन गरेको रकममा साढे चार लाख डिपीआरमा स्वाहा गरिएको भन्ने नयाँ नेपालको समाचारमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखलाई दश लाखको बजेटमा के भएको हो सो को पूर्ण कागजात सहित जानकारी दिन पत्र पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्त हरि पण्डितले जानकारी दिए । ‘त्यहाँ के भएको हो ? समाचारमा आएको कुरा के हो भन्ने पुरा विवरण सहित मन्त्रालयलाई जानकारी दिन पत्र पठाएका छौं ।’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट जवाफ आएपछि अन्य प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालिकोटका कर्मचारीको मिलेमतोमा दश लाखको योजनामा साढे चार लाख रुपैंया बीरेन्द्रनगरमा रहेको धीर बहादुर फडेराको इन्जिनियरिंग रिर्सोस मल्टिपल नामक कन्सल्टेन्सीलाई कार्यालयले सोझै खातामा दियो । कन्सल्टेन्सीले रौतहटबाट दुइ जना प्राविधिक ल्याएर सर्भे ग¥यो । एक लाख रुपैंया वृक्षारोपण गर्न भन्दै अलग राखियो । त्यसबाट बचेको साढे चार लाख रुपैंयाले ७० जाली खरिद गरियो । जालीको मूल्य प्रतिजाली ३२ सय भन्दा बढि खरिदमा खर्च भयो । ‘१.५ वर्ग मिटरका ४० वटा र दुइ वर्ग मिटरका ३० वटा जाली हामीले खरिद गरेका थियौं । त्यसमध्ये हामीले डेढ वर्ग मिटरको जाली भरेवापत १५ सय र दुइ वर्ग मिटरवाला जाली भरेवापत २ हजार दियौं ।’ उपभोक्ता समितिका सचिव मनप्रसाद तिमिल्सेनाले भने, ‘एक लाख बीस हजार जाली भरानमा खर्च भयो । ४५ हजार गाडी भाडा दियौं । समिति खर्च भनेर २० हजार खर्च भयो । अरु सबै जाली खरिदमा खर्च भयो । ढुंगा टाढा देखि ल्याउँनु पर्ने थियो । हामी सबै अन्यायमा प¥यौं । एक लाख रुपैंया वृक्षारोपणका लागि भनेको छ । दुइ किलोमिटर हिँडेर अहिले सेरीघाटमा टिमूरको विरुवा लिन जाँदैछु ।’
उनले सडकमा जाली भर्ने खर्च नै कम भएको गुनासो गरे । ‘दश लाखमा ४ लाख ४९ हजार रुपैंया डिपीआरवालालाई दिएछन् । एक लाख रुपैंया र्वषारोपण गर्न दिएका छन् ।’ उनले भने, ‘हामीलाई चार लाख एकाउन्न हजार मात्रै दिइयो । यो पैसाले के काम गर्नु, कसैको पनि श्रम अनुसारको पैसा दिन सकिएन ।’ वडा नं. दुइ का अध्यक्ष मानबहादुर शाहीको सहयोगमा जालीको जाँगी खन्ने र ढुंगा फुटाउन डोजर सहयोग मागेर काम सम्पन्न गरिएको उनको भनाई थियो ।
उनले डिपीआर कै नाममा आधा बजेट लगेको र त्यो बजेटमा काम गर्न सकिँदैन भनेर कार्यालयलाई भनेपनि कसैले नसुनेको बताए । ‘हामीले सबै स्थानमा गुनासो पोख्यौं कतैबाट पनि सुनुवाई भएन ।’ उनले भने, ‘हामीमाथि अन्याय भयो । गाउँकाले दश लाख रुपैंयामा अरु रुपैंया कहाँ गयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । डिपीआर भनेर कसरी बुझाउनु समसया भयो ।’
वडा अध्यक्ष शाहीले पनि काममा नागरिक पिल्सिएको बताए । ‘मैले प्रदेश सभा सदस्य कुर्मराज शाहीलाई भनेको थिएँ । यहाँ अन्याय भो भनेर । उहाँले मन्त्रीलाई भन्नुभयो तर केहि भएन । नागकिरले धेरै टाढाबाट श्रमदानमै ढुंगा बोकेर भएपनि काम गरे ।’ उनले भने, ‘मैले उजुर गर्न खोजेको थिएँ । डिपीआर बनाउन पाउने कानून भएको जिल्लाका हाकिमले भनेृ । अनि म पनि चुप लागें । तर यहाँका नागरिकमाथि अन्याय भएको मैले चुपचाप हेरिरहें ।’
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख भरत शाहले कार्यालयबाट गल्ती भएको स्वीकार गरे । ‘दश लाखमा साढे चार लाख कन्सल्टेन्सीको खातामा रकम गएको छ । त्यो वाहेक एक लाख रुपैंया वृक्षारोपणकालागि खर्च हुनेछ ।’ उनले भने, ‘बाँकी रकम उपभोक्तँको खातामा गएको छ ।’ उनले भने, ‘तीनै पक्षलाई हामीले बोलाई छलफल गरेका छौं ।’ उनले कन्सल्टेन्सी कार्यालयकै समन्वयमा छनौट भएको स्वीकार गरे ।